ओलीले नै पुन राजसंस्था फर्काउने पक्का ! राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने जतिले सेयर गरौं
प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नै पुन राजसंस्था फर्काउने पक्का ! राजसंस्था हुनुपर्छ भन्ने जतिले सेयर गरौं बदलिँदो अवस्थामा उत्पन्न राजनीतिक घटना र विकासक्रमले राप्रपालाई उत्साहित बनाएकाले उनीहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा लागेका हुन् भनिन्छ । उनीहरूको विश्लेषणमा ‘राष्ट्रिय- अन्तर्राष्ट्रिय
परिस्थितिले नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यस्तै भयो भने मुलुकको राजनीतिक सिष्टम नै कोल्याप्स हुनसक्छ । त्यसैले महाधिवेशन मंसिरमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भनिएको छ । कसरी सिष्टम कोल्याप्स होला र ? भन्ने जनआस्थाको जिज्ञासामा राप्रपा स्रोतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई
दिल्ली र हरिद्वारमा गरिएको भव्य स्वागतलाई सितिमिति ठान्न नहुने भनेको छ । उसको दाबी छ, ‘त्यत्रो भव्य स्वागत गरेकाले भारतले केही न केही निर्णय गर्छ । त्यो क्षणलाई आफूहरूले राजनीतिक रुपमा क्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । कतै केपी ओलीले क्यास गर्लान् कि भन्ने डरचाँहि ठूलो छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसरी क्यास गर्नुहोला र भन्ने जिज्ञासामा राप्रपाका एकजना नेता भन्छन् ‘राजा पुनर्स्थापित गरिदिए आफूहरू जिल्लिने डर कमल थापाहरूलाई परेको छ ।’भारतको आतिथ्यलाई हेरेर राप्रपा र राजावादीहरूले दक्षिणको मित्रले नेपालमा सांस्कृतिक राजाको व्यवस्था गराउने बुझेका छन्
उनीहरूको बुझाईमा त्यस्तो बेलामा पनि कार्यकारीचाँहि राष्ट्रपति नै हुनेछन् । राजा सांस्कृतिक रुपमा मात्र रहने भन्ने हो । व्यवहारमा गणतन्त्र र राजतन्त्र दुवै रहने सहमति पहिले गिरिजाको पालामा नै गरिएको भनेर ती नेताले पूर्वमन्त्री तथा नेता निरञ्जन थापालाई उद्धृत गर्दै बताएका छन् । त्यो बेलामा राजाले नमानेको कारण कुरो बिग्रिएको उनीहरूको दाबी छ ।
२०७८ असार ७, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 788 Views